iPad 2 vs Surface 2 | Vaovao IPhone
Microsoft dia nanolotra tao New York ny modely Surface vaovao mba hifaninana, tsy amin'ny iPad ihany, fa miaraka amin'ny sisa amin'ny takelaka misy Android sy Amazon Kindle. Ny anarana nofidina ho an'ireo maodely vaovao dia Surface 2 sy Surface Pro 2. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiatrika ny Surface 2 ihany isika, satria ny maodely Pro 2 dia mivoaka ny tsenan'ny takelaka, ary azo raisina ho safidy amin'ny MacBook Air (samy manana Core i5 Haswell).
iPad: A6X dual-core miaraka amina processeur sary quad-core ary RAM 1GB.
Surface 2: mpanodina NVIDIA Tegra 4 amin'ny 1,7 Ghz sy RAM 2 gb.
iPad: fampisehoana LED-backlit Multi-Touch sy Retina miaraka amin'ny haitao IPS miaraka amin'ny teknolojia IPS 9,7-inch miaraka amin'ny vahaolana 2.048 amin'ny 1.536 teboka isaky ny iray inch (p / p).
Surface 2: efijery 10,6-inch miaraka amina fanapahan-kevitra 1920 an'ny 1080, ClearType Full HD.
iPad: iOS 7, vaovao ary nohavaozina tanteraka.
Surface 2: Windows 8.1. Ny kinova RT ho an'ny takelaka taloha dia tsy fahombiazana noho ny fetra nananany rehefa nametraka rindranasa misy (ireo rindrambaiko mitovy amin'ny Windows 8 dia tsy afaka napetraka). Na izany aza, nisafidy kinova vaovao izy ireo saingy mitovy fetrany ihany.
fizakan. Samy manana ny fizakantenany, 10 ora eo ho eo. Amin'ny tranga iPad, izay misy dikanteny misy ifandraisany amin'ny tamba-jotra finday, ny faharetany dia ahena adiny iray, hatramin'ny sivy.
iPad: Araka ny voalazan'ny Apple, misy eo amin'ny 375.000 eo ho eo ny rindranasa azo ampiasaina amin'ity fitaovana ity (misy ny rindrambaiko izay tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny iPad fa tsy amin'ny iPhone), izay ahafahanao manao na inona na inona, manomboka amin'ny fanaovana sary, famoronana mozika, famerenana sary ireo sary. Na inona na inona mitranga hatao amin'ny iPad, dia hanana ny fampiharana mifanaraka aminy.
Surface 2: Ilay Surface 2 vaovao indray dia mampiasa Windows RT nohavaozina. Saingy raha tsy mitombo ny tontolo iainana ny rindranasa misy anao, na dia mifaninana amin'ny vidiny amin'ny iPad aza izy, dia tsy hanana na inona na inona hatao ianao raha toa ka tsy ampy ny rindranasa ilaina sy ilaina hampiasana ity fitaovana ity. Ahitana ny Office 2013 RT ho toy ny mahazatra, miaraka amin'ny optimise Outlook ho an'ny touchscreens.
iPad: 1,2 Mpx eo aloha. Aoriana: 5 Mpx. Miaraka amin'ny fakan-tsary eo aloha dia azonao atao ny manoratra amin'ny 720p sy ny any aoriana ao amin'ny 1080p.
Surface 2: 3,5 Mpx eo aloha. Aoriana: 5 Mpx. Amin'ny fakantsary roa dia ho azo atao ny manoratra horonantsary amin'ny 1080p.
DIMENSION SY lanjan'ny
iPad: Ny kinova Wi-Fi dia manana lanja somary ambany kokoa noho ny Surface 2, mijanona 652 grama (10 grama bebe kokoa ao amin'ny kinova finday). Ny haavony dia napetraka amin'ny 24,12 cm ary ny sakany 18,57 cm. Ny hateviny dia raikitra amin'ny 9,4 milimetatra.
Surface 2: Ny Surface 2 vaovao dia nampidina ny lanjany ho 679 grama. Ny hateviny dia nijanona ho 8,9 milimetatra. Ny refy dia mitovy amin'ny maodely 27,46cm x 17,20cm teo aloha.
iPad: 16, 32, 64 ary 128 GB.
Surface 2: 32 sy 64 gb. Mandritra ny roa taona voalohany, hanana tahiry 200 GB azo alaina amin'ny alàlan'ny Skydrive, Dropbox an'i Microsoft izahay. Ny ankamaroan'ny fahafahan'ny fitaovana dia hosakanan'ny rafitra fiasa ary ny rindranasa rehetra napetrany mialoha, noho izany ny habaka maimaim-poana amin'ny fitaovana dia mihoatra ny latsaka miaraka amin'ny antsasaky ny fahaizan'ny maodely (arakaraka ny dikanteny). Amin'ny fananana mpamaky karatra microSD dia azontsika atao ny manitatra ny habakan'ilay fitaovana na mampifandray kapila ivelany amin'ny alàlan'ny port USB 3.0 izay entiny.
iPad: Manomboka amin'ny 469 euro ho an'ny kinova Wi-Fi misy fitehirizana 16 GB ary 629 euro ho an'ny kinova Wi-Fi + Cellular misy 16 GB.
Surface 2: Ho an'ny kinova 32 GB, napetraka amin'ny 429 euro ny vidiny. Raha mila fahaiza-manao bebe kokoa isika dia afaka mahita ny kinova 64 GB amin'ny 100 euro fanampiny, 529 euro.
iPad: Ny hany fifandraisana misy dia ny taratra Lightning, izay azontsika ampiasaina hampihenana ny iPad sy hampiarahana azy amin'ny solosaina.
Surface 2: manana fifandraisana 3.0 USB izy io, ahafahanao maka tahaka ny rakitra ary mampita fitaovana hafa. Manana slot hamakiana karatra SD micro izy io. Mba hilalaovana ny sarimihetsika voatahiry ao amin'ilay fitaovana dia azontsika atao ny mampiasa ny fifandraisana HDMI ananany.
AZO ATAO AMIN'NY iPAD?
Izaho manokana dia mieritreritra fa diso indray i Microsoft amin'ny fampiasana ny kinova RT ho an'ity maodely ity. Araka ny efa nanamarihako teo aloha, ny fetra sy ny tsy fisian'ny programa ho an'ity kinova Windows 8 ity dia tsy manome safidy mahasoa raha ny amin'ny fijerena azy raha toa ka mitady ny fanovana na mividy takelaka voalohany isika. Mety ho an'ny orinasa madinidinika misy Office sy Outlook RT no hanompoana azy ireo mihoatra ny ampy ary tsy mila zavatra hafa intsony izy ireo. Fa ho an'ny besinimaro sy ny orinasa lehibe dia tsy hitako ho azo atao izany.
Ny olombelona ihany no biby mandingana ny vato iray indroa. Tadidio fa very $ 900 tapitrisa niaraka tamin'ny kinova teo aloha i Microsoft ary ny Surface 2 dia mitovy amin'ny Surface RT.
Etsy ankilany, ny Surface 2 Pro, raha hitako izany amin'ny fijoroana hijoro amin'ny MacBook Air, manana processeur matanjaka afaka mitantana ny Windows 8 feno ary afaka mametraka ireo rindranasa mifanentana rehetra nefa tsy manana fetran'ny ny kinova RT.
Fanazavana fanampiny - Microsoft dia manolotra ny Surface 2 sy Surface Pro 2 vaovao, Apple nandefa ny iOS 7, efa azo havaozina izy io, Ny 64GB Surface Pro dia manana 23GB maimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » fifaninanana » iPad vs Surface 2
Fako sy fako marobe, hianjera indray ny varotrao rehefa hivoaka ny iPad 5 sy iPad Mini vaovao
Lahatsoratra iray nosoratan'i Apple fanboy. Fahalianana izaitsizy fa ratsy daholo ny Surface rehetra, misy hatrany ny tagline. Napetrakao fa ny Apple Store dia manana rindrambaiko 375.000 ho an'ny Ipad, fa aza milaza hoe ao amin'ny Microsoft Store dia misy 100.000 3.0, manisa fa kely kokoa ny fotoana ilain'izy ireo. Etsy andaniny, IOS dia tsy mampiasa fampiharana mitovy amin'ny OS X, dia mitovy amin'ny fanakiananao ny Windows RT. Ny processeur an'ny Surface dia mamakivaky ny Ipad, ny RAM, ny fonony mikasika, Usb XNUMX, OS iray nohatsaraina raha oharina amin'ny Windows RT, Office, Professional an'ny Microsoft tany am-boalohany, tonga ... Rehefa mitsikera zavatra ianao dia manaova fanajana. objectif izany Ary aza atao mpankafy toy izany
Ny mazava dia ny Ipad dia natao ho an'ny Leisure, ary ny Surface ho an'ny fialamboly, fianarana ary asa. Rehefa samy manana ny tsirony avy ny tsirairay, fa tsy tokony hiezaka hanodikodina ny hevitry ny olona. Ary ekeko fa ny iPad dia vokatra tsara, fa ambonin'izany rehetra izany dia fantatro ny fahafahan'ny Apple mivarotra na inona na inona vidiny, na tsara izany na tsia.
Ny iPad rehefa niseho teny an-tsena dia tsy nisy olona nampitahàna azy. Mazava ho azy fa izay takelaka miseho dia tsy maintsy ampitahaina amin'ilay voalohany niseho teny an-tsena. Ny tsy fisian'ny fampiharana natokana ho an'ny Windows RT ihany no mahatonga azy hihena amin'ny fampitahana. Ho an'ny sisa amin'ireo endri-javatra dia tsy naneho hevitra aho fa ambany na oviana na oviana amin'ny iPad io. Ny iPad dia tsy natao hialana voly fotsiny. Marina fa izaho sy ny ankamaroan'ny tonian-dahatsoratra dia mampiasa azy io hiasa fa tsy hampiala voly ny tenantsika. Amin'ny fananana fampiharana maro dia maro ho an'ny tanjona iray ihany, ny fetra izay hitantsika amin'ny fampiharana iray dia azo resena miaraka amin'ny iray hafa izay manao ny voalaza rehetra etsy ambony miampy ireo filàna vaovao. Ao amin'ny Microsoft Store dia tsy dia misy safidy hafa ho an'ny tanjona mitovy.
Sergio Perez Ruiz dia hoy izy:
Mazava fa azonao ampiasaina izy io hiasa, ny fanontaniana dia ... fitaovana noforonina ho amin'izany tanjona izany ve izy io? Io no faritra heveriko fa tsy misy mpifaninana aminy ny Surface 2, miaraka amin'ny efa napetraka mialoha ny Office, ny Usb, ny fonony fitendry… solosaina finday kely io, nefa ny Ipad dia Tablet lehibe.
Valiny tamin'i Sergio Pérez Ruiz
Izany no nahatonga ny iPad fahombiazana manerantany nandritra ny taona maro ary ny Surface RT dia tena fiasco ... 😉
Gerardo Zapata dia hoy izy:
Navadiko ho an'ny Surface ny iPad-ko ary faly aho, vitako haingana kokoa ny asako ary an-tapitrisany no mamokatra bebe kokoa. Ny "tsy fisian'ny fampiharana" dia tsy tsapa, afa-tsy noho ianao te hilalao Plants vs Zombies 2, ho fanampin'ny multitasking izay nampidirin'i Microsoft dia mahomby indrindra, indrindra rehefa miantso Skype miaraka amin'ireo mpiara-miasa amiko aho raha mahita ny orinasako data amin'ny Excel izay ampiasako amin'ny solosaina ihany. Azoko ampifandraisina amin'ny mpanonta izany ary ampifandraisiko amin'ny fitaovana USB tsy mila adaptatera akory, izay Apple dia lafo be ary tsy naharitra mihitsy, ankoatry ny ankamaroan'ny mpanonta izay tsy mifanaraka, afaka ampifandraisiko amin'ny mpanara-maso sy projecteur misy HDMI ho an'ny fampisehoana miaraka amin'ny PowerPoint feno (izay tsy mampino), izay tsy azo eritreretina ny iPad taloha raha tsy hoe nandoa ny AppleTV izay lafo ihany koa aho. Ny zavatra iray hafa dia ny ahafahako mampifandray ny mpanara-maso ny Xbox! ary ny rindranasa ao amin'ny magazay dia mifanaraka aminy ary mampifandray azy amin'ny monitor ivelany dia manana console amin'ny sary izay nampidirin'i Nvidia aho. Asa lehibe avy amin'i Microsoft izy ity, soso-kevitra mafy aho na ny mpanoratra na ny mpamaky an'ity lahatsoratra ity hanova ny iPad, ho afa-po be ry zareo raha tsy te hilalao Plants vs Zombies 2 araka ny efa nolazaiko (fa ho voavaha ny fotoana)
Valiny tamin'i Gerardo Zapata
Fampitahana fakan-tsary: ​​iPhone 5s vs. Nokia Lumia 1020